वास्तु र विज्ञान : घरमा सकारात्मक उर्जाको आधार हुन सक्छ बगैचा, यदि यी कुरामा ध्यान दिन सके - Sancharpatra No 1 News Portal from Nepal in Nepali
वास्तु र विज्ञान : घरमा सकारात्मक उर्जाको आधार हुन सक्छ बगैचा, यदि यी कुरामा ध्यान दिन सके
सञ्चारपत्र - 2020 May 07 10:14 PM Tweet
ज्योतिष शास्त्रहरूले वास्तुलाई विज्ञानको रूपमा लिएका छन् । योसँग प्रत्येक नियम र तर्कको साथ वैज्ञानिक वा व्यावहारिक तथ्यहरूको आधार हुन्छ । आजभोली अधिकांश भवन निर्माण कायहर्रु वास्तु अनुसार भइरहेको छ । वास्तुको केही नियमहरू छन् जुन कोठा देखि भान्छा र कौशी देखि बगैंचासम्म । यी नियमहरुका अनुसार यदि घरमा केहि परिवर्तन हुन्छ वा शुरू हुन्छ भने यसले घर र घरका मानिसहरुलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ । वास्तुमा घरका बगैंचामा पनि विभिन्न प्रकारका नियमहरू दिइएका छन् । यदि घरमा सानो वा ठुलो बगैचा छ भने वास्तुमा कस्तो किसिमका बोटबिरुवा र सजावटहरू हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा धेरै प्रकारका कारणहरु छन् ।
१. वास्तु नियम र त्यस पछाडिका कारणहरू
बगैचा सधैं घरको उत्तर वा पूर्व दिशामा हुनुपर्दछ । सामान्यतया, यो दिशा बगैचाको लागि शुभ मानिन्छ, तर यसको वैज्ञानिक कारण यो हो कि यदि बगैचा घरको पूर्व वा दक्षिण भागमा छ भने, त्यहाँ बोट बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।
२. फोहरा वा झरना कहाँ लगाउने
सामान्यतया मानिसहरूले पानीको फोहरा गार्डनलाई सुन्दरताको लागि बीचमा राख्छन्, जबकि यो पूर्व वा उत्तर दिशामा हुनुपर्दछ । यसको कारण यो हो कि हावा सामान्यतया दुई प्रकारका हुन्छः पूर्वी वायु र उत्तरी वायु । दुबै दिशाबाट हावाको बहावको कारण, बोटबिरुवाहरूले त्यस झरनाको पानीको हावामा हावाबाट प्राप्त गर्न सक्दछन् । वास्तुमा पूर्व र उत्तरलाई देवहरूको दिशा र पानीको ठाउँ मानिन्छ । यस कारणले गर्दा, यहाँ एउटा फोहरा वा झरना राख्नु राम्रो हुन्छ । बगिरहेको पानीले घरमा सकारात्मक उर्जा ल्याउँछ ।
३. कति अग्लो विरुवा लगाउने
बगैंचा छनौट गर्दा सधैं बगैंचाको आकारलाई ध्यानमा राख्नुहोस् । केवल २ फिट अग्लो बोटहरू लगाउनुहोस् । यो किनभने साना बोटहरूले कम ठाउँ लिन्छ, साथै तिनीहरू घर, हावा र प्रकाशको लागि कहिले पनि समस्या हुने छैनन् । ठूला बोटबिरुवाहरूले घरभित्र ताजा हावा र सूर्यको किरण पाउन गाह्रो हुन्छ । सूर्यको किरण र ताजा हावा वास्तुमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । यदि घरको बगैंचा ठूलो छ भने केहि ठूला बिरूवाहरू किनारमा रोप्न सकिन्छ ।
४. बालबालिकाहरुको मनोरन्जन र अध्ययन गर्ने ठाँउ बगैचा
बालबालिकाहरुको मनोरन्जन र अध्ययन गर्ने ठाँउ सँधै उत्तर पूर्व दिशामा हुनुपर्दछ । यो दिशा सकारात्मक ऊर्जा र भगवानको दिशा मानिन्छ । बच्चाहरूले यहाँ खेल्दा र अध्ययन गर्दा, उनीहरूको मानसिक विकास अन्य स्थानहरूको तुलनामा बढी हुन्छ ।
५. सजावट मूर्ति कहाँ राख्ने
सामान्यतया मानिसहरु बगैचाको सजावटका लागि बगैचाको बीच भागमा ढुगां वा मूर्ति सजावट गर्दछन् । जबकि त्यस्ता सजावट दक्षिण वा पश्चिम दिशामा हुनुपर्दछ । यसको व्यावहारिक पक्ष भनेको कुनै सजावटी टुक्रा बगैंचामा भए तपाईं त्यो बगैंचाको पूर्ण उपयोग गर्न सक्नुहुन्न । साथै, त्यहाँ बच्चाहरु लड्ने वा चोट लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ ।